Intel inoisungazve pamwe nekumwe kunetseka kunokanganisawo chaiyo yekuchengetedza manejimendi | Linux Vakapindwa muropa
Intel inoisunga zvakare pamwe nekumwe kunetseka uko kunokanganisawo chaiyo yekurangarira manejimendi
Chakavanzika kukanganisa kwekuchengetedza iyo inobata zvese zvazvino Intel mapurani ekuvaka ane kugona kuita chaiyo memory. Kugadziriswazve kweaya maratidziro ehurdware angangodikanwa kugadzirisa dambudziko iri, asi zvigamba zvakatoshanda kuti zvigadziriswe kubva pasoftware uye zvigamba zvatova kumhara muLinux kernel. Muchiitiko cheMicrosoft masisitimu akavakirwa paWindows NT, akatanga kugadziriswa munaNovember wegore rapfuura. Imwe nyaya yakafanana neiyo yataive nayo nekusagadzikana kwakakurumbira kwakabata ndangariro dze RAM uye inozivikanwa saRowhammer, kukanganisa kuchengetedzeka.
Zvakanaka, ikozvino iri dambudziko nyowani rinogona kunge richikanganisa magariro eakajairwa seakajairika uye anoshandiswa sevhisi ye Amazon Web Services (AWS) EC2 uye zvakare yeGoogle Compute Injini pakati pevamwe. Ichokwadi ndechekuti dambudziko harina kunyanya kukura, asi kukura kwacho kwakapamhama nekuda kwenhamba yakakura yezvivakwa zvainokanganisa, mukuwedzera pakugadzirisa dambudziko uchishandisa software rakaomarara. Kunyanya, dambudziko rakatorwa kubva kune iyi Intel kukanganisa riri muLWN, iyo kernel peji yekuzvitsaura matafura uye inopindira mukutungamira kwekurangarira nekernel. Ipapo tinowana iyo mhinduro yakaoma kana zvikaitwa nesoftware uye izvo hazvingareve zvakanakisa zvemhinduro uye kune rimwe divi isu tinofanirwa kuenda kumudzi wedambudziko nekugadzirisa patsva Hardware, kunyanya zvivakwa zvakavakirwa izvo zvinobvumidza kubata mhando iyi yekurangarira. Izvo hazvina kudhura kana kutsanya futi, nekuti isu tichafanirwa kumirira zvizvarwa zvitsva zvehardware izvo zvataizofanira kuve nazvo.
Asi kudzokera kusoftware solution, ndiko kuti, nekuchiva, hazvina kunaka chero sezvo zvaizokanganisa mashandiro acho. Yedu CPU inogona kuve neakakura mashandiro ekurasikirwa, anosvika makumi mashanu muzana. Sei? Zvakanaka, kuti uigadzirise, kodhi inofanirwa kugadzirwa kuitira kuti igone kurasa ndangariro yeTLB (Dudziro Lookaside Buffer), cache iyo inomhanyisa mashandiro zvakanyanya nekutsvaga nekukurumidza uko iyo data nemirairo zviri mune chaiyo ndangariro yeiyo system. Asi kuva nekudzima pese panotanga kernel uye pese panoshandisa kodhi yemushandisi kuitisa, nekuti dambudziko rinozivikanwa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Intel inoisunga zvakare pamwe nekumwe kunetseka uko kunokanganisawo chaiyo yekurangarira manejimendi
Iyo poppy popover ye "titevere isu paFacebook" iyo inoonekwa pane kushanya kwese (zvirinani, kana makuki akagezwa), inoyamwa ...
Zvakanaka, enda neimwe nzira uye usavhime.
Ini ndinobvumirana zvachose, zvinogona kuve kune rumwe rutivi rwepeji uye kwete pane kadhi rese kukumanikidza kuti uvhare. Izvo mune yakashata kuravira.
Chinhu chakanaka chandiri kutotamira ku AMD Ryzen.
murombo kutaura akadaro
Nhau dzakashata. Haisi dambudziko reLinux, asi dambudziko rekugadzira reIntel CPUs. Zvakanyanya kwazvo. Zvikuru zvekuti mhinduro chete ndeyekugadzirisa masisitimu anoshanda kuti aibhure (linux, windows, ios, nezvimwewo).
Pindura kune varombo vanotaura